Paul Wright, PhD သည် Porn သုတေသီများ၏မေးခွန်းထုတ်စရာနည်းဗျူဟာများ (၂၀၂၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
Paul Wright, PhD သည် Porn သုတေသီများ၏မေးခွန်းထုတ်စရာနည်းဗျူဟာများ (၂၀၂၁)
Paul Wright ပါရဂူဘွဲ့သည်အလွန်လေးစားခံရသူဖြစ်ပြီး တီထွင်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီ။ သူသည်ဤနယ်ပယ်မှအခြားသူများနည်းတူပင်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောသူနှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်မှမောင်းနှင်သည့်လိင်ဗေဒပညာရှင်များ၏လှည့်စားသောနည်းပရိယာယ်များ (နှင့်သူတို့၏ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာစာတမ်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း) ကိုသူငြီးငွေ့နေသည်။ သူသည်အယ်ဒီတာကိုပေးသောသီးခြားပေးစာများတွင်သူတို့၏အလွှာနှစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, နှင့်နှစ် ဦး စလုံး stratagems ရှေ့ဆက်သွားစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုအကြံပြုသည်။
“ Causation ဟာတူညီတဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး”
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များသည် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောတရားဝင်သက်သေအထောက်အထားများသည်“ ဆက်စပ်မှု” မျှသာဖြစ်သောကြောင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိကြောင်းစာနယ်ဇင်းသမားများ (နှင့်နားထောင်သူမည်သူမဆို) ကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးသည်။ တကယ်တော့အခုဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိနေပါပြီ အကြောင်းတရားများ ထိခိုက်နစ်နာမှုများဖြစ်စေပြီး Wright သည်ဤအချက်ကိုအယ်ဒီတာထံပေးသည့်သူ၏ဒုတိယပေးစာတွင်ကျွမ်းကျင်စွာပြောကြားခဲ့သည်။ညစ်ညမ်းသောလူမှုဆက်ဆံရေးကို“ ရွေးချယ်သော - ဖော်ထုတ်ခြင်း” အဖြစ်ပြုလုပ်ပါစေ၊ ၎င်းကိုသွားခွင့်ပြုပါ၊ ၂။ " စာနယ်ဇင်းသမားများသည် Wright ကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သူများကိုရှာဖွေရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ အသံနှင့်အစီအစဉ်ကိုအခြေခံသောလိင်ပညာရှင်များကိုအားမကိုးဘဲသက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုပုံမှန်လေ့လာသုံးသပ်သည်။
လိင်မှုဗေဒပညာရှင်များ၏စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုဆိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလေ့လာသည့်ပညာရှင်များသည်၎င်းတို့ခံစားသည်ဟုခံစားရကြောင်း Wright ကထောက်ပြသည် ရ porn အသုံးပြုဖွယ်ရှိဆိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုငြင်းပယ် အကြောင်းတရားများ သုတေသီများရှာဖွေတွေ့ရှိသောအပြုအမူများ၊ ယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်သဘောထားများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မကြာခဏပင်ဤငြီးငွေ့ငြင်းခုံမှုများသည်စာတမ်းများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အလွန်မကိုက်ညီသောကြောင့်လိင်ပညာရှင်များကထင်ရှားသည် သုံးသပ် အဆိုပါစာတမ်းများသူတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ *
ပိုဆိုးတာကဒါကိုငါတို့ပေါင်းထည့်နိုင်တယ် ဝီကီပီးဒီးယားတွင်ဘက်လိုက်တည်းဖြတ်သူများ (ကဲ့သို့သော နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Tgeorgescu) နှင့်၎င်းတို့၏ sexology မဟာမိတ်များဤတန်ဖိုးရှိသောစကားပြောရန်အတွက်ပဲ့တင်သံများကိုဖန်တီးပါ။ဆက်စပ်မှုညီမျှကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး။ " တကယ်တော့သူတို့ဟာ Cherry-Pick pro-porn ထပ်ဆောင်းခွင့်ပြုထားသည့်တိုင်ညစ်ညမ်းသောသက်ရောက်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာများမှသရုပ်ပြသုတေသနကိုကိုယ်တိုင်မှန်တယ်လို့ဖယ်ထုတ်ရန်၎င်းကိုအမျိုးမျိုးအသုံးပြုသည်။ ဆက်စပ်မှု သုတေသနလုပ်ငန်း!
ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြသည် ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအန္တရာယ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်သုတေသီများကစိတ်ကျေနပ်မှုရရန်ပညာရှိရာရောက်သည် သူတို့ရဲ့ sexology-overlord ပြန်လည်သုံးသပ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သည်ပြည့်စုံသောနက်နဲသောအရာဖြစ်နေဆဲကြောင်းကြေညာခြင်းဖြင့်? ဆက်ဖတ်ပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုစာတမ်းများ၏ဆွေးနွေးမှုအပိုင်းနှင့်စာဖတ်သူမည်သူမဆိုအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသော်လည်းပုဒ်မများမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသောစာတမ်းများသည်စာရေးသူများအားသတိပေးလိမ့်မည်။ တာဝန်ရှိသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း (X) နှင့်လေ့လာမှု (Y) အောက်ရှိယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ အပြုအမူများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည့်မည်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုမဆို“ ရွေးချယ်ခြင်း - ထိတွေ့မှု” (ဥပမာ - ယုံကြည်ချက်၊ သဘောထား၊ အပြုအမူပုံစံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာလူများ၊ ယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏ ဦး တည်ချက်တွင်လိင်မီဒီယာပါ ၀ င်မှု၏လွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်း) မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာပါဝင်မှုကိုပုံဖော်သည်။
၎င်းသည်ကြက်သို့မဟုတ်ကြက်ဥပြ ”နာ ဟောင်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမည်သည့်အရာက porn အသုံးပြုမှု (X) သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ခံရသည့်ယုံကြည်မှု၊ သဘောထားသို့မဟုတ်အပြုအမူ (Y)? ဥပမာ:
ရှိပြီးသားလိင်အယူဝါဒဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများသည်အကွောငျး] ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း (“ ရွေးချယ်မှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်း”) သို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကွောငျး] လိင်အရအခွင့်အရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ (“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး”)?
စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သလားသို့မဟုတ်နာတာရှည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကြောင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလား မူးယစ်ဆေးစွဲ၌တွေ့မြင်သူတို့အားမှန်?
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများသည်အနာဂတ်၌စိတ်ကူးစိတ်သန်းအချို့ကိုပိုမိုအသုံးပြုရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သလားသို့မဟုတ်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းလား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်?
porn အသုံးပြုမှုကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပါသလား ဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမကျေနပ်မှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်စေသနည်း။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုဆယ်စုနှစ်များစွာလေ့လာခဲ့သော Wright ကကိုးကားဖော်ပြသည် အကြောင်းတရားများ အချိန်နှင့်အမျှဘာသာရပ်များအောက်ပါလေ့လာမှုများများစွာအပါအဝင်အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများ (အလျားလိုက်) ။ သို့သော်စာရေးဆရာများသည် sexology-overlord reviewers များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဆက်လက်လက်လျှော့လိုက်သည်။
တနည်းအားဖြင့်စာရေးဆရာများသည်သူတို့၏စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပိုင်းတွင် X → Y ပြောင်းလဲမှုကိုတရားမျှတစေရန်မြှုပ်နှံထားသည့်အယူအဆနှင့်သီအိုရီအငြင်းပွားမှုများ၏စာမျက်နှာများရှိသော်လည်း Y → X. ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်မှာလည်းစာရေးသူသည်ထိုအချိန်ကဖြစ်နိုင်သည်။ ဆက်ဆံရေး၏ညှနျကွား "untangle" ဖို့ "longitudinal သုတေသန" ကိုခေါ်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာမှလွန်ခဲ့သောနှစ်များမှယနေ့အထိဆွေးနွေးခြင်းကဏ္ofများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရွေးချယ်ခြင်း - ထိတွေ့မှုကြောင့်ပုဒ်မအလိုက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ - ရလဒ်များသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအန်နာကိုးကားရန် "ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ".
Wright သည်ဤအလေ့အကျင့်အားသိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ တကယ်တော့သူက "သိပ္ပံပညာနှင့်ဆန့်ကျင်သည်" ဆိုသောစကားလုံးသည်ညစ်ညမ်းမှုနယ်ပယ်တွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာဖြစ်သည်ဟုပြောရန်မှာ -
၎င်းသည်သိပ္ပံပညာနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ သိပ္ပံပညာတွင်ဗဟုသုတအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာသည်“ ပြောင်းလဲလာသည်။
Wright အသေးစိတ်ရှင်းပြသည့်အတိုင်း“ ထုတ်လုပ်သောဗဟုသုတအသစ်” လည်းပါဝင်သည် တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ panel ကိုဒေတာကိုအသုံးပြု။ "Cross- နောက်ကျ" longitudinal လေ့လာမှုများ X → Y နှင့် Y → X ၏ directionality များအတွက်ရှင်းလင်းချက် XY ဆက်ဆံရေး။ သူကရေးသားခဲ့သည်:
၏အယ်ဒီတာမှဤပေးစာ၌တည်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း သူကသက်ဆိုင်ရာ 25 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ပြောင်းပြန်နောက်ကျ) အလျားလိုက် porn လေ့လာမှုများ (ဆိုလိုသည်မှာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်ခြေ) ဆိုလိုသည်မှာအကြံပြုခြင်း။ ၁၄ ခုကအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်လေ့လာမှုနောက်ပိုင်းရလဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုမှာမူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မဟုတ် နောက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ လေ့လာမှုဆယ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကြိုတင်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်မှုများကြောင့်အချို့လူများသည်အခြားသူများထက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုများပြားစေပြီးထိုလူများ၏ထိတွေ့မှုကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု (porn-shill က်ဘ်ဆိုက်ဖြင့် RealYBOP.com အသင်း ၀ င် Stulhofer) ပြောဆိုထားသည် ကြိုတင် propensities porn အသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းပေမယ့်၎င်း၏ခြုံငုံဆက်စပ်မှုပုံစံအပြန်အလှန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်မည်သည့် ဦး တည်ချက်အတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်သူသည်မျိုးစုံ (စံသတ်မှတ်ချက်ပြောင်းလဲမှု) အလျားလိုက် panel လေ့လာမှုများ (ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်နိုင်ခြေ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပြုခြင်း အန significant တရာယ်ရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ→ရလဒ်အသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်၊
Wright သည်သုတေသနအခြေအနေ (နှင့်အသိပေးချက်များကိုအလွဲသုံးစားပြုမှု) ကိုအကျဉ်းချုံးထားသည်။
ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုများသည်ရွေးချယ်ခြင်း - ထိတွေ့မှုကြောင့်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆသည်စုဆောင်းထားသည့်သက်သေသာဓကများနှင့်ဆန့်ကျင်။ သိပ္ပံပညာသည်အသုံးမ ၀ င်ဟုယူဆသောအတွေးအခေါ်တစ်ခုမှသာထောက်ခံနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆ လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းကိုသာသီးခြားရပ်တည်နေသောသီးခြားအပိုင်းအစဖြစ်သည်; လေ့လာမှုတစ်ခုချင်းစီမှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အစမှစတင်ရမည်။ နှင့်သိပ္ပံပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ပွင့်လင်းမဟုတျကွောငျး - အချိန်ကုန်လွန်နှင့်သက်သေအထောက်အထားအသစ်၏မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစား၏နည်းလမ်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်မရသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါစပ်စုနှင့်ပညာသည် သူကအားလုံးစာရင်းနှစ်ခုအထောက်အကူဖြစ်စေစားပွဲပေါ်မှာပါဝင်သည် အလျား ၃၉ လေ့လာမှုတွေ သူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
ဒါဟာ Wright လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသီများနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ် / အယ်ဒီတာများ porn မဟုတျကွောငျးသူတို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဂါထာအပေါ်အခိုင်အမာဆက်လက်တာဝန်ရှိသည်ထင်သည်ရှင်းပါတယ် ဖြစ်စေတဲ့ အသုံးပြုသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ တကယ်တော့ဒီမှာ စာရေးသူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ ဒီလှည့်စားသောအနတ္တကိုရပ်တန့်ရန်။ သူ၏အကြံပေးချက်များသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သောကြောင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့သည်စာလုံးပေါင်းပါဝင်သည်။
စာရေးဆရာများ: ရွေးချယ် - ထိတွေ့မှုသည်သင်၏တွေ့ရှိချက်များအတွက်ထပ်တူထပ်မျှယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အခြားရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြပါနှင့်။ အကယ်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများနှင့်အယ်ဒီတာများကသင့်အားတောင်းဆိုပါကဤစာကိုပေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့က၎င်းတို့အားဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါက၊ မဖြစ်မနေထုတ်ပြန်ရမည့်“ ကန့်သတ်ချက်” ကြေငြာချက်အားသင့်အားဤမပြည့်စုံသောထင်မြင်ချက်မှသင်အားလွတ်မြောက်စေပြီးဤပေးစာကိုကိုးကားပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်သူ: အကယ်၍ သင်တို့၏အချက်အလက်နှင့်တွေ့ရှိချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောထူးခြားဆန်းသစ်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအရင်းကိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါကရွေးချယ်ခြင်းထိတွေ့ခြင်းသည်၎င်းတို့၏ရလဒ်များအတွက်အလားတူဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်စာရေးသူအားမတောင်းဆိုပါနှင့်။ စာရေးသူဖော်ပြသောညစ်ညမ်းသောလူမှုရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစာပေအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ စာရေးသူများကကြေငြာချက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုဖယ်ရှား။ ဤစာသို့ပို့ပါ။
အယ်ဒီတာများ: စာရေးသူများကရွေးချယ်သောထိတွေ့မှုအတွက်အသိပေးချက်ကိုတောင်းဆိုရန်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်မရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်သူများအားပယ်ဖျက်ပါ။ ဒီစာ၏စာရေးဆရာများကိုအသိပေးပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းရွေးချယ်ခြင်းထိတွေ့မှုအတွက်ကိစ္စအားလက်ရှိစာပေအခြေအနေအရမဖြေရှင်းနိုင်သေးကြောင်းအကြံပြုပါ။
ပေးစာ: ညစ်ညမ်းသောလူမှုဆက်ဆံရေးကို“ ရွေးချယ်ခြင်း - ဖော်ထုတ်ခြင်း” - ခွင့်ပြုပါ၊ ခွင့်ပြုပါ ၂
မလိုလားအပ်သောရလဒ်များကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် extraneous variable များအတွက် overcontrolling ကိုရပ်တန့်ပါ (1st Letter)
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမေးခွန်း -“ အချို့သောလေ့လာမှုများသည်အဘယ်ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောလေ့လာမှုများကိုအဘယ်ကြောင့်တားဆီးနိုင်ပြီးညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများ (ဥပမာလိင်အရသဘောထားများ) အကြားဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသနည်း။ ” အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်၊ သို့သော် Paul Wright သည်အချို့သောညစ်ညမ်းသုတေသီများအလုပ်များသည့်ပြင်ပကိန်းရှင်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောရိုးရှင်းသောဆက်နွယ်မှုများဖြစ်သည့်ဥပမာ - ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ဆက်ဆံရေးမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည် မေးခွန်းထုတ်စရာအပိုဆောင်း variable တွေကိုအတွက်ထည့်ပါ (မကြာခဏရန် minimize or ရှုပ်ထွေး တွေ့ရှိချက်များ) ။ သတင်းအချက်အလက် podcast တိုတိုကိုနားထောင်ပါ ကြောင်းက "confounding" variable တွေကို, "ဖြန်ဖြေ" variable တွေကိုနှင့် "moderating" variable တွေကိုအကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြသည် ... က variable တွေကိုအားလုံး (ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးနေထက်) ရလဒ်များကိုရှုပ်ထွေးကြောင်းဟန်ဆောင်ဖို့ဘယ်လောက်လှည့်စား။
ထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုများကိုလျှော့ချရန် variable များကိုအသုံးပြုခြင်းအား Eve ၀ ရက်တောင်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုဟုခေါ်သည်။ two ၀ ရတ်တောင်တန်းဒေသသည်လူ ဦး ရေ ၂ ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်သင်“ ထိန်းချုပ်” သောအခါ။ ဥပမာ, အမြင့်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက် height ၀ ရက်တောင်သည်အခန်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။ ရွှေ အရိုးအရှည်ကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်၊ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်မဟုတ်.
အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်ဟာဖြစ်ရပ်တစ်ခုရဲ့အရေးပါတဲ့ပစ္စည်းကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့မော်ဒယ်လ်ကိုသုံးပြီးအဲဒီအကြောင်းကိုရှုပ်ထွေး / အထင်မြင်မှားအောင်လုပ်ပါ။ လိင်ပညာရှင်များ၏လေ့လာမှုများအရဤပရိယာယ်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် တွေ့ရှိချက် obfuscate ရန် ညစ်ညမ်းတဲ့နေရာမှာညစ်ညမ်းတဲ့နေရာကိုထားတယ်။
ဤအယ်ဒီတာထံပေးပို့သောစာတွင်သူသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောညစ်ညမ်းသောလိုလားသူသုတေသီများဖြစ်သော Kohut, Landriput နှင့် Stulhofer ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဒီယောက်ျားတွေဟာဒီစိတ်မကောင်းစရာနည်းပရိယာယ်ကိုသုံးပြီးသူတို့ဂရုမစိုက်တဲ့ရလဒ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်မယ့် (သီအိုရီအရမရှိ) စဉ်းစားနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့် - အားထုတ်မှု -posing-as-တာဝန်ရှိ - သုတေသန ။
In ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အထီးလိင်ကျူးကျော်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုပုံစံကိုစမ်းသပ်ခြင်း - ခရိုအေးရှားမှလွတ်လပ်သောဆယ်ကျော်သက်နမူနာနှစ်ခုအတွက် longitudinal assessment),” Kohut, Landriput နှင့် Stulhofer ကသူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအလွန်များပြားသောနည်းပရိယာယ်များသည်သူတို့၏လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည် အကောင်းဆုံး Wright နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပြုသောအမှုတ ဦး တည်းရန်။ Wright & လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလေ့လာချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုခြင်းသည်နှုတ်နှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင် - ကျူးကျော်မှု၏အမှန်တကယ်လုပ်ရပ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်လူ ဦး ရေလေ့လာမှုများကို meta-analysis လုပ်သည်") ။
Kohut, Landriput နှင့် Stulhofer တို့ကထိုရလဒ်ကိုမကြိုက်ကြပါ။ အများပြည်သူနှင့်ယုံလွယ်သောစာနယ်ဇင်းသမားများကမူ“ ထိန်းချုပ်နိုင်သောကိန်းရှင်များ” ကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့မှော်အတတ်၊ အကြမ်းမဖက်သောအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိတော့ပါ။ Wright ကလေးစားသောသုတေသီများသည် K, L & S တို့၏ပြောဆိုချက်ကိုသဘောမတူကြောင်း“ ထိန်းချုပ်နိုင်သော variable များကသုတေသနကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်သည်။ ” တ ဦး တည်းက "အတိုင်းအတာများမြို့ပြဒဏ္legာရီ။ "
စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည့် Wright ကရှင်းပြသည်
ထိုကဲ့သို့သောစာပေပေါင်းစပ်မှုများမှတစ်ဆင့် (၁) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များမှလေ့လာခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာမှုကိုစစ်တမ်းနည်းစနစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ (၂) ဤသုတေသနပြုချက်တွင်ပါ ၀ င်နေသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာပါရာဒိုင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းရှိ၊X) သည်ယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ အပြုအမူအချို့နှင့်ဆက်နွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။Yစာရင်းအင်းတစ်ခုအဘို့အညှိပြီးနောက် အစဉ်အဆက်တိုးပွားလာနှင့် "ထိန်းချုပ်မှု" variable တွေကိုပို။ ပို။ ပိုင်ထိုက်သောစာရင်း (Z ကြော်ငြာ infinitum).
လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၊ အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေ၊ အသက်၊ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမ၊ ပညာရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးစာသားများ၏သဘောထားအမြင်များ၊ စောင့်ရှောက်သူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများပါဝင်သည်။ လိင်မှုကိစ္စ၊ လူမျိုးရေးလက္ခဏာ၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုလက္ခဏာများ၊ PTSD လက္ခဏာများ၊ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု၊ သက်တူရွယ်တူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ရွယ်တူချင်းများ၊ မိဘများအားတွယ်ကပ်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်း၊ မိဘထိန်းချုပ်မှု၊ ရွယ်တူချင်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ လိင်စိတ်ခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ မိသားစုနောက်ခံ၊ လိင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမှုမှု၊ ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ တေးဂီတဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ ဘာသာရေးဆက်နွယ်မှု၊ ဆက်ဆံရေးအရှည်၊ လူဝင်မှုနောက်ခံ၊ မြို့ကြီးတစ်မြို့တွင်နေထိုင်ခြင်း မိဘအလုပ်အကိုင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ခိုးမှုသမိုင်း၊ ကျောင်းပြေးခြင်း၊ ကျောင်းပြproblemsနာများ၊ လိင်မှုကိစ္စစတင်ခြင်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းအပေါ်လိမ်လည်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု၊ ကွာရှင်းမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ ဘာသာရေးသူငယ်ချင်းအရေအတွက်၊
နောက်တဖန် - ဤဥပမာအနည်းငယ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုများ၏ပါဝင်ပါဘူး မဟုတ် တစ် ဦး ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုတိကျသောနိဂုံးချုပ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ X → Y စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာအသင်းအဖွဲ့။ အမှန်မှာ၎င်းသည်အတုအယောင်မှားယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်တိကျခိုင်မာစွာဘာမှမရှိပါ။ ကိစ္စများစွာတွင်၎င်းသည်အတော်ပင်လှည့်စားတတ်သည်။ Wright ဆက်လက်:
လက်ရှိချဉ်းကပ်မှု၏အခြေခံ (ထင်မြင်ချက်) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှု၏အမှန်တကယ်အရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မဟုတ်ဘဲအချို့သောတတိယပုံစံသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ စာရေးသူအနည်းငယ်ကမူထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသော variable တစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လေ့လာမှုရလဒ်များကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယေဘူယျအားဖြင့် (တစ်ခါတစ်ရံအကိုးအကားများဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံမပါဘဲ) အထွေထွေကြေငြာချက်တစ်ခုသည်ကြိုတင်သုတေသနပြုထားသည့်ကိန်းရှင်များကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင်ထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားအချိန်များတွင်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုစာရင်းပြုစုရန်အတွက်မည်သည့်ရှင်းပြချက်မျှပေးသည်မဟုတ်ပါ။ တိကျသောသီအိုရီဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်လေ့လာမှုများကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသည် (နောက်ပိုင်းတွင်ဤအချက်အပေါ်ပိုမို) ။ လေ့လာမှုများကိုခန့်မှန်းသူများ၊ ဖျန်ဖြေသူများသို့မဟုတ်မော်ဒကဲသမားများထက်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ပုံစံပြုထားသည်ကိုတရားမျှတသည့်လေ့လာမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ရှားပါးသည် (ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမမြင်ဖူး) ။
ပညာရှင်အရင်းအမြစ်များ Wright ကကိုးကားဖော်ပြသည်မှာ“ သန့်ရှင်းရေးနိယာမ” သည် (ထပ်တိုးကျပန်းကျပန်းများကိုထိန်းချုပ်ခြင်း) သည်ခိုင်လုံသောသီအိုရီများကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သည်။ Wright ကပြောခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုများသုတေသနရှုခင်းကိုစုစုပေါင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ၊ ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည် idiosyncratic၊ ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်မှာသုတေသီများတွင်ကြိုတင်သုတေသီများတွင်ရှိသောကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်၊ အယ်ဒီတာများသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများက၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (Bernerth & Aguinis, 2016) သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည် "နည်းစနစ်ဆိုင်ရာမြို့ပြဒဏ္legာရီ" ၏သားကောင်ဖြစ်သွားသောကြောင့်၊ ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုမပါဘဲထက်အမှန်တရားပိုမိုနီးကပ်စွာ။ "
ဟုတ်ပါတယ်၊ Kohut, Landriput နှင့် Stulhofer တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတည်ရှိနေသောချိတ်ဆက်မှုကိုသံသယ ၀ င်ရန်အမှန်ပင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကယုံကြည်ကြသည်။ (Kohut & Stulhofer မဟာမိတ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley porn-shill site ပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com). သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောလေ့လာမှုများကိုပုံမှန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြproblemsနာမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏မဟာမိတ်များသည်ပိုမိုထိရောက်သောသုတေသီများ၏သက်သေသာဓက၏အရေးပါမှုကိုလျစ်လျူရှုကာထိခိုက်လွယ်သောဂျာနယ်လစ်များနှင့်ဝီကီပီးဒီးယား၏အကူအညီဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဝေးကွာသည့်ရလဒ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြေငြာခဲ့သည်။
Wright ကခိုင်ခိုင်လုံလုံပေမယ့်ယဉ်ကျေးစွာပြောရရင် Kohut, Landriput နဲ့ Stulhofer ကိုသူတို့ရဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုမှုနည်းနည်းလေးအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများသည်တတိယအမျိုးအစားများကိုဆက်ဆံရန်သူအကြံပြုသည် ခန့်မှန်း (ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အမျိုးအစားကိုခွဲခြားသောအချက်များ) ။ ဒါမှမဟုတ်အဖြစ် ဖျန်ဖြေ (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုရှင်းပြသည့်ယန္တရားများ) ။ ဒါမှမဟုတ်အဖြစ် ဆန်းစစ်ခြင်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုတားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည့်လူများနှင့်အခင်းအကျင်းများ) ။ ဒါပေမယ့်သူကသူတို့ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည် ရပ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ယုံကြည်မှုများ၊ စိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြုအမူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဤရှုပ်ထွေးသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများ၊
စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ Wright သည်ထိန်းချုပ်ရန်မသင့်လျော်သောအချက်များကိုဥပမာများနှင့်ဖော်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စဉ်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို“ ယခင်ကတည်းကရှိနေခြင်း” နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်မသင့်လျော်သောသူ၏မှတ်ချက်များကိုမလွတ်သွားပါစေနှင့်။
အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပမာ၊ Wright ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သုတေသနကိုပြသကြောင်းထောက်ပြသည် အနာဂတ်ဟော နောက်မှပြောင်းပြန်မဟုတ်ဘဲအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊
အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရလဒ်ဆက်စပ်မှုများကိုသာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရထားသောဇာတ်ကြောင်းသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းနှင့် (ဤတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရလဒ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အဆိုပါပင်ကိုယ်မူလစံချိန်သို့သော်မဟုတ်ရင်အကြံပြုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ဘုံ၌ Stoolmiller, Gerrard, Sargent, Worth နှင့် Gibbons (2010) သည်သူတို့၏လေးလှိုင်း၊ နှစ်ရှည်လများဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိရသည်။ R-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကနောက်ပိုင်းတွင်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ Stoolmiller et al ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကို "ပေးသတိပြုပါ အာရုံခံစားမှုရှာကြံအပေါ်တစ် ဦး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထား.
ထို့ကြောင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုကိုရှာဖွေလာသည်။ Wright သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကိုညွှန်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအာရုံစိုက်သောဤအချက်အလက်များ၏နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကလိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတွင်တိုးလာမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (အလှည့်၌အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (O'Hara, Gibbons, Gerrard, Li, & Sargent, 2012) ။
နောက်ဆုံး၌သူ၏ အကြံပြုချက်များ Wright သည်အချို့သောလိုလားသူသုတေသီများ၏အစွန်းရောက်ဘက်လိုက်မှုကိုရည်ရွယ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားပါကကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများသည် ၁၀၀% ပညာရှင်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအခိုင်အမာအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသောယူဆချက်အချို့မှရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ကျွန်တော့်ကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါမမွေးခင်ကသူမသုံးစွဲသူတွေကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ငါယုံကြည်တယ်။ ငါသွားတဲ့အချိန်မှာလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ အတူတူ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်တစ် ဦး တည်းသောဆက်သွယ်ရေးဒိုမိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဓိပ္ပါယ်များသည်သုညသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အမြဲတမ်းအတုအယောင်ဖြစ်စေပြီးအခြားသောလွတ်လပ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဒီအမှုမဟုတ်ပါယူဆရန်လုံလောက်သောသီအိုရီဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို“ မီးဖိုချောင်ထဲ၌နစ်မြုပ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် (ရလဒ်) ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးသလား” ပေါ်တွင်“ တံခါးဖွင့ ်၍ တံခါးကိုပိတ်လိုက်” ရန်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတောင်းဆိုသည်။ ချဉ်းကပ်နည်း။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အမျိုးအစား၊ ရလဒ်များကို ဦး တည်စေသောယန္တရားများနှင့်ထိုရလဒ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသောလူများနှင့်အခင်းအကျင်းများခွဲခြားသောတတိယမြောက် variable များကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်စေလိုသည်။
ပေးစာ: “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှုကိုထိန်းချုပ်ပါ၊
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုတေသနပြုသည့်နယ်ပယ်အတွင်းရှိ scummier နည်းဗျူဟာအချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားရာ၌သူ၏ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်ပေါလ် Wright အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြားသုတေသီများကသူ၏အကြံပြုချက်များကိုနှလုံးသွင်းပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်သူများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်သူများကိုအလွန်အမင်းဘက်လိုက်မှုနှင့်သူတို့မကြိုက်သည့်သုတေသနကိုငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့စွာလျှော့ချခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ရှည်လျားသောတစ် ဦး ရှိတော်မူကြောင်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ sexologists နှင့် Big Porn အကြားပျူငှါနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမျိုး။ စိတ်ပျက်စရာ
* ဒီမှာပုံမှန်ပါပဲ ညစ်ညမ်းဗေဒပညာရှင်သုတေသီ ညစ်ညမ်းမှုသည်ပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဟုသူ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအလွန်အမင်းတွယ်ကပ်နေပြီးမည်သူကမှထပ်မံမပြောရဲဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလေ့လာသည့်အခါဤသူသည်မည်မျှရည်မှန်းချက်ရှိသည်ဟုသင်ထင်သနည်း ?? အရက်သမားသုတေသီများသည်အရက်သောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုမဟုတ်ဘဲအရက်သောက်ခြင်းနှင့်အပျော်အပါးကြားဆက်နွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်ဟုသူထင်ပါသလား။
အနာဂတ်သုတေသနအတွက်သုတေသနပညာရှင်များသည် HSD (သူကသတ်မှတ်သည်နှင့်အမျှကျန်းမာလိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) အနေဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုကိုဆွေးနွေးရာတွင်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သတိပြုသင့်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်အပျော်အပါးများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်သုတေသီများအားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည်။ ၎င်းသည် HSD ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောမောင်းနှင်အားကိုစစ်ဆေးပါ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောညစ်ညမ်းသောလိင်ပညာရှင်တစ် ဦး မှတင်ဆက်ထားသည်:
သုတေသနနည်းစနစ် ၁၀၁ - ပုဒ်မ - ပုဒ်ဖြတ်အချက်အလက်များသည်အကြောင်းပြချက်ကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။
um ... သုတေသနနည်းလမ်းများ 201: longitudinal ဒေတာ နိုင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြောင်းမရှိအကြံပြုအပ်ပါသည်။